महानायक राजेश हमालको दारी फुल्यो, फेसबुकमा सार्वजनिक गरे यस्ता तस्बिर - Nepalese Times
पूर्वयुवराज पारस साहले प्रहरीमाथि यस्तोसम्म गरेको रहेछ (हेर्नुहोस् भिडियोमा)5घण्टा अघि
गोप्य रुपमा एमसीसी सम्झौता भइसकेको भीम रावलको खुलाशा ! (भिडियोसहित) 18 घण्टा अघि
कोरोना संक्रमणदर हरेक दिन बढ्दैः एकैदिन यति धेरै संक्रमित थपिँदा कतिले ज्यान गुमाए ? 19 घण्टा अघि
महन्थ ठाकुर फेरि सर्वोच्चमा, यस्तो छ माग 21 घण्टा अघि
महानायक राजेश हमालको दारी फुल्यो, फेसबुकमा सार्वजनिक गरे यस्ता तस्बिर
नेप्लिज संवाददाता २० बैशाख २०७८, सोमबार १७:३५ (2 महिना अघि) २४५ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एकछत्र राज गरेको व्यक्तिको नाम हो राजेश हमाल । बुढ्यौलीको लय समातेका नायक राजेश हमालले निषेधाज्ञाको अवधिका केही तस्बिरहरु शेयर गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् सोमबार दिउँसो शेयर गरिएका तस्बिरहरुमा दारी प्रष्टै फुलेको देखिन्छ । आफ्नै मामाले निर्देशन गरेको ‘युगदेखि युगसम्म’ बाट डेब्यू गरेका हमालले अन्तत नेपाली चलचित्रमा ‘एक युग’ नै राज गरे ।
पहिलो चलचित्रबाटै ‘स्टार’ भएपछि उनले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन । पछाडि फर्केर हेर्ने फुर्सद पनि भएन उनलाई । त्यसताका छिमेकी बलिउड चलचित्र उद्योगमा मिथुन नामका नायकको निकै बोलबाला थियो । सुरुमा मिथुनजस्तै लुक्स भनेर हमालको चर्चा भयो ।
राजदूतको छोरा, विदेशमा एमए पढेका, अंग्रेजी खरर बोल्न सक्ने, शिव श्रेष्ठभन्दा ठूलो ‘बड्डी’ भएका, फाइट खेल्न माहिर ‘ हमालका बारेमा यस्तै–यस्तै गफ सुन्ने गरिन्थे त्यसबेला ।
उनै हमालले करिब १५ वर्ष नेपाली चलचित्रमा एकछत्र राज गरे । त्यसपछिका १० वर्षसम्म उनी नायकका रुपमा सक्रिय रहे । तीन वर्षदेखि चाहिँ उनी निस्क्रिय छन् । नेपाली चलचित्रमा ‘हमाल युग’ अन्त्य भएको छ । नेपाली चलचित्रको धार पनि बदलिएको छ । अहिले चल्तीका कलाकारहरु हमालभन्दा फरक शैली र विशेषताका छन् ।
चलचित्रमा सक्रिय नरहे पनि हमाल चर्चाबाट बाहिर भने छैनन् । उनको रोव पहिलेजस्तै छ । एउटा पुस्ताका दर्शकमा उनको क्रेज छँदैछ । यसको जबरजस्त छनक अहिले देखिएको छ, ‘महानायक’ सम्वन्धी विवादमा ।
१४ वर्षअघि पहिलोपटक हमाललाई ‘रजतपट’ नामक चलचित्रसम्वन्धी टिभी कार्यक्रमले ‘महानायक’ भनेर सम्मान गरेको थियो । त्यसलगत्तै चलचित्र प्राविधिकहरुको संगठन प्राविधिक संघले पनि हमाललाई महानायक सम्वोधन गर्दै सम्मानित गर्यो ।
संघले त्यसबेला हमाल र नायिका करिश्मालाई संयुक्तरुपमा महानायक र महानायिकाको सम्मान दिने तयारी गरेको थियो । तर, करिश्मा कुनै विवादमा मुछिएका कारण अन्तिम समयमा उनको सम्मान स्थगन गरियो ।
यसरी राजेशलाई दिइएको महानायक उपमालाई नेपाली चलचित्रका दर्शकले सहजै स्वीकारे ।
राजेश हमालको ‘महानायक’ उपाधि औपचारिक मान्यताप्राप्त होइन । पृथ्वीनारायण शाहलाई बडामहाराजधिराज भनेजस्तो वा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई महाकवि भनेजस्तो उनको नाम अगाडि महानायक जोड्नै पर्ने अनिवार्यता कसैलाई छैन ।
जस्तो वीपी कोइरालालाई कांग्रेसले महामानव भन्छ, अरुले भन्दैनन् । हमाललाई पनि मन लाग्नेले महानायक भन्न सक्छन्, मन नलाग्नेले नभन्न सक्छन् ।